Haweenay xiran faraanti uu ku qoranyahay “Allah” oo laga helay Sweden | Somaliska
Haweenay xiran faraanti uu ku qoranyahay “Allah” oo laga helay Sweden
Quburo baaritaan ku samaysa nolosha umadihii hore ayaa waxay jasiirada Björkö ee ka tirsan degmada Ekerö isla markaana caan ku ah tuulada Birka oo lagu noolaa sanadihii 750-975 ay ka heleen haraaga Haweenay Swedish ah oo xiran faraanti uu ku qoranyahay magaca “Allah” oo carabi ah. Haweenaydaan oo la sheegay in ay geeriyootay qiyaastii qarnigii 9-aad ayaan la aqoon sida ay ku heshay faraantiga. Quburada ayaa sheegay in tani ay muujinayso in uu xiriir ka dhexeeyay Swedishkii xiligaas noolaa oo loo yaqaanay Vikings iyo khaliifadii Muslimiinta. Swedishka ayaa la sheegay in ay ganacsi u aadi jireen dhulkii Muslimiintu ay maamuli jireen sida magaalada Istanbul iyo Baghdad.
Quburada ayaa sheegay in ay macquul tahay in haweenaydaan ay faraantiga u keeneen ganacsatadii Vikings ee booqday Muslimiinta ama iyada ay tagtay dhulkaasi. Ama xitaa ay macquul tahay in ay halkaasi ka timid. Taariikhda Muslimiintii noolaa qarnigii 9-aad ayaa muujinaysa in ay xiriir ganacsi la lahaayeen Vikings, iyadoo mid ka mid ah taariikhyanada Muslimiinta oo lagu magacaabo Ahmad ibn Fadlan uu qoray in “Vikings ay ahaayeen dadka ugu nadaafada xun bani’aadamka, oo aan iska dhaqin saxarada isla markaana aan qubaysan marka ay galmoodaan, oo xitaa aan faraha iska dhaqan marka ay cuntada cunaan”.
Dadka Vikings ayaa lagu yaqaanay in ay ahaayeen burcad, iyagoo aad ugu wanaagsanaa safarka badda, isla markaana wadamada kale u tagi jiray in ay soo dhacaan. Xitaa waxaa la sheegay in Vikings ay ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee tagay qaarada America. Balse markii ay Vikings booqdaan khaliifada Muslimiinta, ayaa taariikh yahanadu sheegeen in ay ganacsi keliya u tagi jireen maadaama ay Muslimiintu ka awood roonaayeen isla markaan ay ka ilbaxsanaayeen.
Si kastaba ha haaatee, taariikhda haweenaydaan iyo in ay Muslim ahayd iyo in kale, ayaan la hubin balse waxaa cajiib ah in ay dhimatay iyada oo xiran faraanti uu ku qoranyahay magaca Allah.
Dowlada Sweden oo isbadal ku samaynaysa sharciga deganaanshaha
DAAWO: Telefishinka SVT oo ka qeyb-qaatay daan-daansiga lagu hayo Muslimiinta Sweden
jimcaale maanta waxaan kaa hayaa, war bixin aad u wacan iyo qoraal aad u heer sareeya.
warkan xagee ka soo xigaty?
diinta islaam wa diin aadab iyo akhlaaq ku dhisan rag ayaana usoo dadaalay soona kaarsiiyay cadowgane tusi jiray tabartooda lkn waxa ka daba maray dad xun ow diinta ka dhegtay wax lagu falaado waa yartahay inta islaamka ah ow amaann mudan subxanallah wa 54 dowladood ama ka badan mana jirto dowlad ku dhaqanto diinta islaamka ilaahey waxow ku furay fitno dhexdooda ah ow kaarsiisay iyagow islaam ah iney is kaaleysiiyan
March 26, 2015 at 07:03